Iwo maSonsoles Ónega mabhuku: kushuva, mbishi, rudo, hunhu uye nezvimwe | Zvazvino Zvinyorwa
Vashandisi veInternet pavanopinda "Sonsoles Ónega Libros" muwebhusaiti yavo, mhedzisiro inowirirana Mushure merudo (2017). Iri ibasa rakavakirwa pahupenyu chaihwo nyaya iyo, gore rimwe chetero rakaburitswa, rakatungamira Ónega kuhwina iyo Fernando Lara Novel Prize. Kutsvoda chiuru kwakarambidzwa (2020) zvakare inomira pakati pezvakaitika, uye hazvishamise. Iri razvino rorudo runyorwa ndiro razvino bhuku rakapihwa nemunyori wechiSpanish.
Basa remutori wenhau uye munyori akagamuchira kumwe kucherechedzwa kwakakosha, achijekesa kuhwina kechitatu edition yeShort Novel Literature Award, Calle Habana, kona Obispo. Pamusoro pebhuku rambotaurwa, munyori akaburitsa mamwe matatu anonakidza mabasa, ese aine kugamuchirwa kukuru kubva kune vaverengi nevanoongorora. Parizvino, munyori anoshanda semuratidziri pane chiteshi Tele5.
1 Pfupiso pfupi yehupenyu hwaSonsoles Ónega
1.1 Sonsoles Ónega, mutori wenhau
1.2 Sonsoles Ónega, munyori
2 Mabhuku naSonsoles Ónega
2.2 Iko Kwanga Kusiri Mwari (2007)
2.3 Mushure merudo (2017)
2.4 Kutsvoda chiuru kwakarambidzwa (2020)
Pfupiso pfupi yehupenyu hwaSonsoles Ónega
Sonsoles Ónega Salcedo akaberekerwa muMadrid, neChitatu, Mbudzi 30, 1977. Ndiye mwanasikana wechipiri wemuchato pakati pemutori wenhau ane mukurumbira weGalician uye munyori Fernando Ónega naMarisol Salcedo. Munguva yehudiki hwake, Sonsoles aizivikanwa nekuve akangwara uye anoda kuverenga, chinhu chaaifarira chaaifarira pakati pemabhuku muraibhurari yemhuri. Akafemerwa nenjodzi yababa vake, Ganega akasarudza kudzidza degree reBachelor muJenali, uye mushure mekudzidza kuECU San Pablo University kuMadrid, akawana degree rake.
Sonsoles Ónega agara achichengeta hupenyu hwake hwepachivande hwakangwara kwazvo. Akaroora mu2008 negweta Carlos Pardo, mubatanidzwa wakaguma nevanakomana vaviri. Imba yavo yakasvika kupera muna 2020, mushure mehukama hwekuparadzanisa hwakatangisa gore rapfuura.
Sonsoles Ónega, mutori wenhau
Mushure mekupedza kudzidza nehunyanzvi mumadhiya ekuteerera, akatanga nhanho dzake dzekutanga sehunyanzvi mu CNN +. Muna 2005 akabatana neterevhizheni network Four. Mushure memakore matatu ebasa ipapo, akapinda mugero Tele5, kwaakashanda makore gumi semunyori wezvematongerwo enyika. Mune ino svikiro, rake rezvenhau basa rave kugara richikura.
Muna 2018, Sonsoles akatora dambudziko semutevedzeri wechirongwa "Ya es noon", icho chaachiri mutungamiriri. Pakati pekuonekwa kwake kwekupedzisira, akararama maSvondo galas emwaka wekutanga weiyo chokwadi "Imba yakasimba" mu2020.
Sonsoles Ónega, munyori
Kusvika iye zvino, Ganega akagadzira nano nhanhatu dzinonakidza. Bhuku rake rekutanga, Calle Habana, kona Obispo, yakatangwa muna 2004; mune iri basa munyori anoratidza zvinoitika zveCuba yakadzvanyirirwa. Panga pasina Mwari (2007) yaive yake yechipiri kuburitswa. Iri ibasa rakafemerwa nezviitiko zveMadrid kurwisa kunozivikanwa se11M. Gare gare, munyori akaburitsa Misangano muBonaval (2010) uye Isu avo vaida zvese (2015).
Kunyangwe mabasa ataurwa pamusoro aya ari emhando yepamusoro yekunyora, raive bhuku rake rechishanu rakamubatsira kuti abudirire. Zviri nezve inoverengeka Mushure merudo (2017), zvichibva pazviitiko chaizvo. Iyo nyaya yakagadziridzwa pamusoro pemapeji 592 uye iri yerudo rwepachivande urwo rwunorwira pakati pegakava reSpain yema1930. Zvino, Kuti aenderere mberi nebasa repeni rake rakanakisa, munyori akaburitsa bhuku rake muna2020 Kutsvoda chiuru kwakarambidzwa, iyo yakave nekugamuchirwa kukuru.
Heano wongororo pfupi yemabasa emunyori wechiSpanish uyu:
Calle Habana, kona yeObispo (2005)
Iri ndiro bhuku rekutanga rakanyorwa naSonsoles Ónega. Iyo ipfupi rondedzero yenhau, inokodzera yechitatu edition yeiyo Pfupi novel manotsi mubairo. Inopa nhoroondo yeCuba muma 90s, uye mhedzisiro yakatambudzwa nekuparara kweSoviet Union. Pakati pemitsara yayo pane vanhu veCuba zuva nezuva mushure mekutambura nekurwa vasina maoko vachipesana nehutongi hunodzvinyirira hwaFidel Castro. Iyi nyaya yakaberekwa kubva pane zvakaitika kumunyori parwendo rweHavana muna2000.
Vapikisi vayo vakuru ndiSaivy Cisneros Ballín nemwanakomana wake Sebastián; vese vari vaviri vanorwa nenzira yavo vachipesana neCastroism. Saivy anoedza kuchengetedza imba yake mune yakanaka - nepo zvese zvakapoteredzwa zvichidonha -, achirarama ari mupenyu kunyepedzera kwekudzoka kwemukadzi wake, uyo akakwanisa kubva pachitsuwa makore apfuura. Sebastián, kune rake divi, anoita chinhu chake achishingairira kurwa kubva pakupokana. Iyo nyaya izere neyakaomarara chokwadi chekuti mamirioni emaCuba achiri kurarama.
Panga pasina Mwari (2007)
Ndiyo bhuku rekutanga rakanyorwa nezvekurwiswa kwakaitika muMadrid musi waKurume 11, 2004, kwaive nevane 191 vakafa uye vangangosvika zviuru zviviri vakakuvadzwa. Nyaya inotanga mambakwedza musi iwoyo, zvishoma nezvishoma ichitsanangura hupenyu hwevanhu vakasiyana siyana. Pakati pavo pane wezvematongerwo enyika, mutori wenhau, mutorwa, mutongi nemuchuchisi. Pasina mubvunzo, zano rizere nema nuances mune ese ma protagonists anokanganisa hupenyu hwavo panjanji dzechitima.
Musi iwoyo, boka revaIslam rakakwira mungoro dzeAlcalá de Henares station ndokudyara zvinoputika, nokudaro zvichikonzera kuuraya kukuru. Ganega akanyora bhuku iri achitarisa pamanzwiro uye zviitiko zveavo vakaurayiwa, pasina kupa kukosha kune vanoita zvakaipa. Munyori anosimbisa kuti izvo zvataurwa zvakanyatsoitika, nezvipomerwa zvakaunganidzwa naiye mukati memakore matatu anoenderera kuchiitiko.
Paive Mwari ...
Mushure merudo (2017)
Pane ino nguva, Ónega anopa yerudo inoverengeka yakaiswa muSpain yemakumi matatu, pamberi pe Civil War. Iri zita rakabudirira rinotaura nyaya yekuda kuvanda - zvichibva pazviitiko chaizvo. Basa iri rakaitwa nemazvo zvekuti rakakunda iyo XXII Fernando Lara Novel Prize. Vanonyanya kutaurwa ndevaya: Carmen Trilla - mukadzi akavharirwa muwanano isina mufaro - uye mukuru wemauto Federico Escofet.
Zvese zvinoitika munguva apo Captain Escofet aive nebasa rakakosha muSpain uye mukurwira rusununguko rweCatalonia. Carmen, kune rake divi, akararama munguva dzakaoma, sezvo yaive nguva iyo vakadzi vasina izwi kana vhoti. Vaviri vanorarama rudo rwokupandukira urwo rwunorwa nesosaiti nemakakatanwa enguva iyoyo. Nhau huru inobata muverengi uye inomuputira mune chaicho chakaoma chaigara neSpanish.
Mushure merudo (Zhizha ...
Kutsvoda chiuru kwakarambidzwa (2020)
Mushure mekubudirira kwebhuku rake rapfuura, Ónega anounza ino yazvino nyaya yekudanana, iyo yakaiswa paGran Via de Madrid. Iyo nyaya inotanga nemukana wekusangana waConstance - gweta uye achangobva kurambana - uye Mauro - mupristi achangosvika achibva kuRome. Causation yakaunza pamwechete nzvimbo mbiri idzo muhudiki hwavo dzakararama kunyepedzera kukuru, uye izvo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vaifanira kuparadzana.
Iwo ma protagonists, pavanosangana mushure memakore makumi maviri, vanodzoreredza iwo manzwiro ese akange amiswa. Mushure meizvozvo, kurwira kwemukati kwekunzwa, kushuva uye kuramba kunoburitswa nekuti ihwo husingagone hukama Iyi nyaya - yakataurwa mumunhu wechitatu - Izvo zvakanyorwa mune makumi mana neshanu zvitsauko umo vaviri mweya vakaroorana vanongoshuva kuguma kunofadza.
Kutsvoda chiuru kwakarambidzwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku naSonsoles Ónega